तपाईका आगन्तुकहरु अधिक जान्न वा अरु पढ्न चाहँदैनन् Martech Zone
शुक्रबार, मार्च 1, 2013 शुक्रबार, मार्च 1, 2013 Douglas Karr
प्राय: समय, बजारहरू अधिक यातायात प्राप्त गर्न यति व्यस्त हुन्छन् कि उनीहरूले पहिले नै प्राप्त गरेको यातायातको रूपान्तरण प्रतिशत सुधार गर्नमा समय खर्च गर्दैनन्। यो हप्ता, हामी समीक्षा गर्दै थियौं बहु-टच ईमेल प्रोग्राम दायाँ खुल्ला अन्तर्क्रियात्मकको ग्राहकको लागि। ग्राहकले केहि अद्भुत अभियानहरू राख्यो तर यो कम क्लिक-थ्रु दर र रूपान्तरणबाट ग्रस्त छ।
हामीले याद गर्‍यौं कि प्रत्येक ईमेलमा उनीहरूसँग समान लिंकहरू थिए जुन ग्राहकलाई साइटमा फिर्ता ड्राइभ गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो:
रेजिष्टर गर्नुहोस् ...
म यस जस्तो टेक्स्ट लि using्कहरू प्रयोग गर्न विरोध गर्दिन, तर जब उनीहरू टिजरहरू, सुविधाहरू, सुविधाहरू र जरुरीताको भावनाको साथ जोडेका छैनन्, तिनीहरूले क्लिकहरू तपाईंले प्राप्त गर्नु हुने छैन। कल्पना गर्नुहोस् कि यदि यी लिंकहरू रूपान्तरण गरियो:
हाम्रो ग्राहकहरु कसरी प्राप्त गर्दै छन् पढ्नुहोस् उत्पादकत्वमा तीन गुणा बढ्छ। अब तपाईंको व्यवसायको साथ उत्पादकता बढेको देख्न सुरू गर्नुहोस्।
हाम्रो प्लेटफर्म कसरी सिक्नुहोस् सजीलै एकीकृत तपाईंको हालको अनुप्रयोगहरूको साथ।
२ मिनेटमा, यो अद्भुत भिडियोले तपाईंलाई आज साइन अप गर्न किन आवश्यक छ भनेर वर्णन गर्दछ तपाइको जीवन परिवर्तन गर्नुहोस.
सिटहरू सकौं, आज डेमोको लागि दर्ता गर्नुहोस् र हाम्रो ebook नि: शुल्क पाउनुहोस्!
एक लाभ र जरुरीताको भावना तपाईंको क्लिक-थोरै दरहरूमा नाटकीय असर गर्दछ। दरहरू मार्फत क्लिकहरू बढाउनको लागि ईमेल वा लेखमा अवसर खेर फाल्नुहोस्। व्यक्तिहरू चाहँदैनन् अझै सिक, थप पढ्नुहोस्, घडी or दर्ता जबसम्म उनीहरूलाई थाहा हुँदैन कि त्यसो गर्दा त्यहाँ फाइदा हुन्छ!
नोट: उल्लेख नगर्नु जुन यी प्रकारका शब्दहरू आन्तरिक रूपमा लिंक गर्नु डरलाग्दो अनुकूलन हो। अधिक वर्णनात्मक भाषामा लिंक थप्नाले तपाईंको सामग्री राम्रो खोज ईन्जिनका लागि अनुकूल गर्दछ।
टैग: अझै सिकलिंक पाठथप पढ्नुहोस्अहिले हेर्नुहोस्
सीएमओ सर्वेक्षण परिणाम
मार्क्स 2, 2013 मा 12: 41 PM
मैले यस पोष्ट पढ्दा, त्यहाँ मार्केटपाठको लागि एक विज्ञापन छ जसले केवल "थप जान्नुहोस्" says भन्छ
मार्क्स 3, 2013 मा 2: 46 PM
धेरै हास्यास्पद, @robbyslaughter: disqus! त्यहाँ सीटीए बढाउने अवसर छ। उनीहरूको बचावमा, म त्यहाँ एउटा फाइदा छ जस्तो लाग्छ - 'सजिलो'।